Wasaarada duulista oo dalka ka mamnuucdey diyaaradihii hore ee Ruushka iyo sababta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasaarada duulista oo dalka ka mamnuucdey diyaaradihii hore ee Ruushka iyo sababta
Wasaarada socdaalka iyo duulista hawada ayaa dalka ka mamnuucdey diyaaradihii hore ee Ruushka oo welli ka shaqeeya qaybo ka mida dalka. Diyaaradahan ayaa burburkii noqdey ama bedelay diyaaradii Somali Airline, waxana lagu guri jirey dadka iyo hilibka.
“Weligey ma arag diyaarad ka ur badan aya tiri Xaliimo Aadan oo sanadii 2000 ka soo raacdey Dubey. Anoo diyaarad udgoon ka soo degay ayaa la i fuushiiyay mid urteeda kaliya aan cagta gelin karin iskaba daa in aan fadhiyo 3 saace ayay raacisay.
Mamnuucida diyaaradihii hore ee Ruushka oo xagga amniga aad uga fiican kuwa Maraykanka ayaa ewasaaradu ku macneysay inayna la qabsan karin hagida casriga ah oo ay adagtahay in la hago iyo weliba guuxeeda oo xad dhaafa.
Diyaaradaha Ruushka ee hore iyo kuwa hadda ayaa la isku raacay inay yihiin kuwa shilka yar afuunka waxase reer galbeedku ku hayaa cunaqabatayn iyo dacaayad.
Wasaarada duulista ayaa sheegtay in dadka soo kireystay ay badankoodu bedeleen diyaadahan oo wixii ka dambeeya bishan 15-keeda ayna imaan karin hawada Somaliya.